Nin Naag Isku Soo Ekeysiiyey Oo Khiyaamay Qoys Reer Kuwait Ah Balse Ugu Dambeyn Arin Yaab Leh Ay Qabsatay - iftineducation.com
Nin Naag Isku Soo Ekeysiiyey Oo Khiyaamay Qoys Reer Kuwait Ah Balse Ugu Dambeyn Arin Yaab Leh Ay Qabsatay
iftineducation.com – Haweeney u dhalatay dalka Kuwait ayaa soo saartay arin la yaab leh oo ku saabsan qof iyada shaqaale u ahaa muddo sanad kadib.
Marwada reer Kuwait ayaa dalka Uganda kasoo kaxeysatay haweeney kale oo ay u dooneysa iney u qidmeyso una noqoto jaariyad ama qaadimad, balse arinka la yaab leh ayaa noqday in shaqsiga ay haweeneyda keensatay aysan aheyn haween taas badalkeedana uu ahaa nin.
Haweeneydaan u dhalatay dalka Kuwait markeedii hore meysan ogaan shaqsiga ay iyada keensatay waxa uu yahay oo wuxuu kusoo baasay tijaabadii caafimaad ka waxaana la siin daganaan, layaabka meeshaas yaalla ayaa ah in shaqsigaan uusan qiyaamin kaliya haweeneyda uu u shaqeynayey balse uu soo indha sarcaadiyey dhamaan dhaqaatiirtii iyo shaqsiyaadkii kale ee qaabilsanaa arimaha soo galootiga.
Shakiga ugu weyn ee haweeneyda u dhalatay dalka Kuwait ayaa yimid maalin kadib markii ay aragtay shaqaalaheeda oo hal gacan ku qaadeysa jawaan bur ah oo qiyaas ahaan 25KG ah, haweeneydii ayaase durba la tashatay saygeeda iyada oo ku wargelisay in baaritaan jinsiyeed loola dhaqaaqo shaqsigaan shaqaalaha u ah wuuna ka ogolaaday.
Shaqaalihii ayaase ka biyo diiday in baaritaan dhanka jinsiga ah la marsiiyo si loo kala cadeeyo inuu yahay nin ama naag, balse ugu dambeyn baaritaankii la marsiiyey ayaa lagu ogaaday inuu yahay nin iska dhigay naag, lamana caddeyn ilaa hadda sababta dhabta ah ee ka dambeysa arinkaas, sidoo kale reerka u dhashay dalka Kuwait ayaa diiday in magacooda lagu xuso warbaahinta.
biyaha ragga oo lasheegayaao in gabdhaha kusoo nuuraan hadii galmada badsato
Dhalasho Wacan Sushmita Sen Oo Maanta U Dabaal Degtay Sanad Guuradeedii 41-aad